कोरोना कम हुनासाथ नियमित रेल सञ्चालन हुनेछः भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङ - Narayanionline.com
राससः कुर्था–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि सेट ल्याइएसँगै नेपाल रेलमार्गको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको हो?
रेल नियमित सञ्चालनका लागि ऐन, कानून र व्यवस्थापकीय रुपमा सरकार तयार छ रु
अरु अन्तरदेशीय रेल निर्माणको अवस्था के छ?
एकातिर बजेटको समस्या, अर्कातिर अदालती निर्णय छ, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग कसरी अघि बढ्छ?
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आन्तरिक लगानीमा मात्रै निर्माण गर्न सकिन्छ?
सरकारले रेल्वेको विस्तार र निर्माणको नीति लिएको छ । नयाँ नेपाल निर्माणमा यो क्षेत्रलाई विस्तार गरेर जानुपर्छ भनेर सरकार नीतिगत रुपमा प्रष्ट छ । त्यही ढङ्गले विभिन्न देशसँग सहकार्य गर्ने कुरा अघि बढाइएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआरलगायतका आफ्ना आन्तरिक तयारी अघि बढाइएको छ । बजेटको अवस्थाले भ्याएसम्म दुईतीन वर्षदेखि निर्माण अघि बढाइएको छ । लगानी ठूलो छ । दुई सेट रेल ल्याउन दुई वर्ष लाग्यो । पैँतीस–चालीस किमी रेल बनाउन पनि समय लाग्यो भनेपछि हामीले हजार किमीभन्दा धेरै बनाउनु छ । यसभित्र आवश्यकता कति हुन्, तिनलाई वास्तविक पहिचान गरेर प्राथमिकीकरण गर्ने बाटोमा गइसक्यौँ । ढिलो भए पनि नेपाल रेलको बाटोमा अघि बढ्यो भन्ने स्पष्ट छ । रासस
देवघाटमा अन्तिम संस्कारका लागि दोब्बर शव आउन थाले,एकै दिन १९ जनाको दाहसंस्कार
क्यानले बोलायो २४ खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा
कञ्चनपुरमा एक हजार ७०८ जनाको र्यापिड टेष्ट
नेपालको नयाँ नक्सामा नवलपरासीको सुस्ता समेट्न आग्रह